Emmanuel Macron na-eme mkpebi maka ndị ọbịa na-akwadoghị iwu mgbe ọ mara ụra - teles relay
Emmanuel Macron na-eme mkpebi maka ndị ọbịa na-akwadoghị iwu mgbe ọ mara ya ụra n'ihu
By bryanekobe	 On June 11, 2021
Onye isi ala France Emmanuel Macron, n'oge nzukọ ya na ndị ozi ya, rịọrọ ka atụmatụ ahụ maka ịchụpụ ndị ọbịa na-ezighi ezi ga-aga n'ihu. Mkpebi nke na-esochi ụra Macron nwetara ụbọchị ole na ole gara aga.
A kpọrọ ndị Minista nke Mba Ofesi na ndị nke nke ime obodo na ikpe ziri ezi nzuko a mere na Elysee Obí. A gwara ha ka ha jigide atụmatụ nchụpụ dị, mana iji wusie ya ike site na mkparịta ụka nke ọma na mba ndị mbịarambịa nke ndị ọbịa bi na France. Nke mere na ha nabatara nloghachi nke ndị amaala ha.
Ihe dị ka ndị mba ọzọ 80 na-anọgide na ala France kwa afọ, n’ime ndị na-achọ mgbapu 000. Nke a bụ nnukwu nchegbu dị ka Emmanuel Macron si kwuo, n'ihi na ọ na-esiri mba ahụ ike ịrụ ọrụ n'ihi ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ọbụna nke mgbasa ozi.
Ihe onyonyo a chụrụ onye osote n'ụlọ omebe iwu maka iyi ...
Peru Karịa okpukpu abụọ Na-ekpughe Ọnwụ Mgbe Ha Gụsịrị
Macron yiri egwu iwepụ ndị agha France na Mali
Oge eruola ka nke ahụ gbanwee, site na ịme ihe ngwa ngwa maka ịchụpụ ndị ọbịa na-akwadoghị iwu.
Ya mere, France na-arịọ mba dị iche iche nke ndị ala ọzọ a ka ha nyekwuo kaadị ndị nnọchi anya ha, ka nloghachi ha dị mfe.
I kwesiri ịmara na mkpebi a na-esochi mmerụ ahụ Emmanuel Macron nwetara site n'aka otu nwoke na Tuesday a n'oge nleta ya na Drôme.
E jidere onye na-ebuso ya agha aha ya bụ Damien.Ta jidere ya ozugbo wee maa ya ikpe ụbọchị abụọ ka nke ahụ gasịrị, ya bụ ka ị kwuo taa bụ ụbọchị Tọzdee, ọnwa nke ọnwa Juun ruo ọnwa iri anọ na anọ site n'ụlọ mkpọrọ ikpe nke Valence.
Tenor ọ na-enweta ihe ịga nke ọma site na ịmụ nwa?
Emmanuel Macronmba ọzọụra
Mercato: Toko Ekambi na nlegharị anya nke onye na-atụghị anya ya
40% nke mmefu ego kwa afọ nke ijeri 3 raara nye arụmọrụ
A na-achụpụ onye omeiwu video n'ụlọ omebe iwu maka iyi ọkpa
US na World Bank zigara Ghana aka na ntị maka ...